Savony « Pollen » : Manadio, manamandina
Inona no tokony ho ataon’ny vehivavy mba tsy hampirafy ny olon-tiany ?
Patrick Rakotovao: Manao izay hanintona ilay lehilahy hatrany.
Pronostics BAREA : Hoy ireo vehivavy …
Anio alina no hifanandrinan’ny ekipan’ny Barea an’i Madagasikara amin’ny ekipa Tonizianina mitondra ny anarana Aigles de Carthage. Naka ny hevitry ny mpamaky ny amin’ny mety ho voka-dalao amin’izany ny Jejoo. Toy izao ny tombatombana raha ny hevitr’izy ireo :
BAREA ¼ Finale : Sorohy ny fijanonan’ny fo tampoka!
Nalaza be taorian’iny lalao ampahavalon-dalana iny, izay nandresen’ny BAREA sy ny RDC, ireo olona nodimandry, noho ny fiaton’ny fo tampoka, satria nientanentana. Amin’ny alakamisy izao no hiatrika ny ampahefa-dalana isika ka hisorohana ny loza tampoka, ireto ny torohevitry ny mpitsabo.
Jaona Elite : Ray, vady be fitiavana…namela kamboty 3
Taorian’ny lalao izay nifanatrehan’ny Barea tamin’ny Repoblikan’i Congo no nindaosin’ny fahafatesana tampoka i Randriarimalala Harijaona na Jaona Elite.
Miaro tena amin’ny parasy, raha handeha vakansy
Na any ambanivohitra, na any amoron-tsiraka dia mety ahitana parasy avokoa. Mahasorena anefa ny voakaikitr”izy ireny sady mangidihidy no mampijaly, indrindra ho an’ny ankizy.
Ramilamina : Zava-maniry mitsabo « palpitation »
Fitsaboana nentim-paharazana miainga amin’ny akora hita eny amin’ny natiora eny no entin’ireo mpitsabo fahiny miady amin’ny ody volivoly sy “palpitation”.
Inona ny laoka tena tian’ny ankizikely ?
Samy manana izay sakafo tena tiany ny ankizikely amin’ny ankapobeny, saingy tsy azo ialana amin’ny maha Malagasy antsika kosa ny vary sy ny laoka.
Vokatra vita malagasy, mety sy mifanaraka tsara amin’ny sokajin-koditry ny Malagasy ihany koa, ny savony « pollen ». Ny orinasa “Pollen” no mamokatra azy ary etsy amin’ny Solimotel Anosy ny ivon-toerana misy azy na eny amin’ny “Pavillon” Analakely sy ny “COGELEC” Andrefan’Ambohijanahary.
Savony vita amin’ny tantely ny “Pollen”. Manadio tarehy, manala tasy ary manamaina mony haingana izy. Raha maina be kosa anefa ny hoditra dia manamandina ity savony ity. Herinandro eo dia ahitana vokatra ilay izy. Tombony hafa koa ny fahafahany manalafeka ny volo
Tsy ny tarehy ihany anefa no azo ampiasana an’ity savony ity. Nandramanay fa azo handroana ihany koa ny savony “Pollen”, manala irony hidihidy amin’ny tongotra irony, vokatry ny hatsembohana na tsy fahazakana akora amin’ny kiraro ohatra.
Vidiny : 4.000 Ariary